Indlu enomtsalane "yepenthouse".
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMerle
Indlu enemigangatho emi-2 ehlaziyiweyo kumgangatho ongaphezulu wendlu endala yasefama. Iveze imiqadi, iifestile ezininzi. Igalari enemigangatho yeglasi ivula ukuya kumgangatho ongezantsi. Iimbono ezintle zasemaphandleni kwaye kufutshane namachibi kunye neentaba.
Indlu yanamhlanje ngaphakathi kwindlu endala yasefama. Kukho amanqanaba ama-2. Umgangatho wokuqala unamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Igumbi lokulala eli-1 linebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokulala eli-2 lineebhedi ezimbini zomntu omnye. Inqanaba eliphezulu/loft linoomatrasi aba-2 omnye. Iimbono ezintle ezivela kwiifestile. Kwaye sikufuphi namachibi kunye neeAlps.
4.89 · Izimvo eziyi-72
Ikwilali encinci kodwa inayo yonke into. Kukho indawo yokutyela emangalisayo ngaphesheya kwesitalato. Ivenkile encinci yegrosari (enebhula kunye nekhawuntara yeebhaki) ikumgama nje oyi-100m. Kwaye ivenkile ephilayo enayo yonke into ekuyo kuquka isonka esisandul’ ukubhakwa, kuphela ekoneni, ivuliwe ngooLwezihlanu nangeMigqibelo. Kwakhona ngaphaya kwesitrato kukho icawa yamaKatolika endala. Nceda uqaphele ukuba iintsimbi ziqala ukukhala ngo-6am.
Ezinye iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iposi, iindawo zokubhaka, ibhula kunye nezinye iivenkile zikumgama weekhilomitha ezi-2.
Uhambo lwendalo kunye nokhenketho lwebhayisekile ngokuqinisekileyo luyimfuneko apha. Phuma nje endlwini kwaye kwimizuzu embalwa usehlathini. Okanye uze neebhayisekile zakho kwaye ube namava kwiintlambo kunye neenduli ezijikeleze loo ndawo.
Kubadlali begalufa abanomdla, kukho ikhosi enemingxuma eli-9 nje imizuzu emi-5 yokuqhuba enemibono entle yendawo yaseRavensburg, iiAlps kunye neBodensee.
Umbuki zindwendwe ngu- Merle
We are a multi-culti family who loves to travel and enjoys spending time with friends, family and with the community. We've settled into this old farmhouse in the middle of the village and yet we've got plenty of open space behind us where we can retreat. We're still modifying our spaces here and optimizing it for those times spent with friends and family. So join us in our Green Acres life!
We are a multi-culti family who loves to travel and enjoys spending time with friends, family and with the community. We've settled into this old farmhouse in the middle of the vil…
Sihlala kwindawo esezantsi yendlu ukuze usibone xa udlula endlwini xa ungena okanye uphuma. Sinokuba sendlwini ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ke, uya kusibona kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla. Nangona kunjalo, xa ungaphakathi kwiflethi unemfihlo epheleleyo. Indlu ngokwayo inomnyango onokutshixwa.
Nceda uqaphele ukuba sinenja kwipropati.
Siya kufumaneka xa siceliwe.
Sihlala kwindawo esezantsi yendlu ukuze usibone xa udlula endlwini xa ungena okanye uphuma. Sinokuba sendlwini ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ke, uya kusibona kwimisebenzi yethu y…
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Tagalog
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wilhelmsdorf